Isiyamkhathaza eyokulahla imidlalo ekugcineni kweSwallows - Impempe
Isiyamkhathaza eyokulahla imidlalo ekugcineni kweSwallows
March 7, 2021 Impempe.com
UMogakolodi Ngele weTTM noThabo Matlaba weSwallows FC
Uthi kukhona okufanele bakhule ngokushesha kubadlali bakhe basodongeni lwasemuva ngoba indlela asebangenela ngayo amagoli emidlalweni yeDStv Premiership, useqala ukuba novalo umqeqeshi weSwallows FC, uBrendon “Brakkies” Truter.
Lo mqeqeshi uphinde wabuka iqembu lakhe livumela ukuthi iTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) ibuye seliyoshona ngephenathi evalelwe enethini ngu-Alfred Ndengane.
Nakulokhu iSwallows iyona ewabone kuqala lapho ebegxunyekwe ngakhona amapali igoli lishaywa uZephania Mbokoma esiwombeni sokuqala.
Akukho bungozi obekubukeka sengathi ikubona iSwallows kwaze kwavela iphenathi nayo uTruter athe akayibonanga kahle.
“Akulula ukuwamukela lo mphumela ngoba emizuzwini emihlanu ngaphambi kokuphela komdlalo bekusobala ukuthi ayikho into ezosivimba ekutheni siqoqe amaphuzu agcwele.
“Sikhuluma enye indaba kodwa manje ngoba lokho akwenzekanga… Nakulokhu sihambe phambili kwaze kwaba sekugcineni njengasemihleni kodwa kwaphnde kwabuka isifo sethu (sokungenelwa amagoli ekugcineni).
“Sizamile siyithimba labaqeqeshi ukuphumuza abadlali abese bekhombisa izimpawu zokuthi baya ngokuya bayakhathala ukukhombisa ukuthi siyavala ngoba vele nesikhathi esisekho.
“Bonke abadlali esinabo siyabathemba uma besenkundleni. Ngigculisekile futhi nangesipiliyoni esikhona enkundleni ngaso sonke isikhathi,” kusho yena.
Okumkhalisa kakhulu ukuthi iningi lala magoli akhala ngawo, angena ngemizuzu yokugcina.
“Nakulokhu igoli lingene seliyoshona. Yebo ngeneme ngamagoli esiwashayayo kodwa lo, umdlalo wethu wesikhombisa sicazelana ngamaphuzu. Kweminingi yale edlule okuhlanganisa nalo owanamuhla ngikholwa ukuthi bekumele siyinqobe.
“Amagoli asesingenela ngale ndlela esiqala ukungethusa. Kusobala ukuthi kukhona okufanele bakhule ikakhulukazi kwabasemuva ngoba kwayona iphenathi idaleka nje, akukho bungozi obekubukeka sengathi singaphansi kwabo.
Ujabule nokho ngendlela iqembu lakhe elidlale ngayo ngaphandle kwaleli phutha.
“Ngifisa sikhule kuleli phutha. Ngaphandle kwalo bekumele siwunqobe lo mdlalo.
“Bebezimisele ngale ndlela engigculisile kodwa amaphuzu anqaba. Ngenxa yalokhu kunzinyana ukuwamukela lo mphumela,” kusho lo mqeqeshi sakusokola.
Previous Previous post: IZinyoni ziphinde zayilahla ekugcineni emdlalweni weDStv Premiership
Next Next post: Ugezeke ngaphakathi bebuya namaphuzu agcwele eVenda owe-Arrows